China pp yakashambadzirwa yekushambadzira bhodhi Mugadziri uye Mutengesi | Sihai
PP chemashiripiti pepa kushambadzira bhodhi ndeyezvinhu neh mhango pepa, iri pp isina mhango pepa zvichienderana nechikumbiro chakasiyana chakaitwa silkscreen, UV kudhinda, kunama bepa kudhinda uye vamwe kudhinda kune akasiyana kushambadzira, kusaina bhodhi. Iyo pp chemarata pepa rekushambadzira bhodhi rinoshandiswa zvakanyanya mukushambadzira indasitiri, kushongedzwa kwemba, indasitiri yemidziyo, zvekurima, zvigadzirwa zvemitambo, indasitiri yemotokari, indasitiri yemagetsi zvigadzirwa, zvekupa kwevana, zvipo, indasitiri yezvishongo, kuratidzira kuratidza, zvigadzirwa zvekuratidzira, supamaketi uye vamwe kushambadzira.
1. pp hollow sheet kushambadzira bhodhi rakaburitswa uye rakagadzirwa nePP mbishi zvinhu, zvine simba kukanganisa kuramba, isina mvura uye inovhundutsa, uye nyore kudhinda, yakagadziriswa saizi uye chimiro;
2. Yakanyanya kugarisana nharaunda kupfuura mapepa, zvakare yakasimba, iyo hupenyu itme inguva gumi yemapepa akajairwa;
3. Iwo map hollow sheet mavara anonyanya kuve ebhuruu, nhema uye chena (akasiyana mavara anogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi), uye zviri nyore kune silkscreen uye vamwe kudhinda;
4. Rondedzero dzinogona kuchinjika shanduka zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvakanyanya kusimba, kusimba, kurema kurema, isina mvura uye yakagadziriswa GSM yekukumbira kwakasiyana;
5. iri nyore kupeta, mune isina basa kana kutakura kunogona kupetwa kuchengetedza, chengetedza yakawanda nzvimbo.
6.Dzorerazve, inogona kudzokorodza kushandiswa kakawanda, inogona zvakare kugadzira UV kudzivirira, shandisa mukati mekunze kwenguva refu kuratidza
Pashure: esd pp mhango pepa
Zvadaro: pp mhango pepa kushambadzira bhokisi
3mm Bhuruu Bhuruu Bhodhi Yekushambadzira
Kushambadzira Corflute Board
Kushambadzira Hollow Plastic Board
Pp nenyere Bhodhi Yekushambadzira
Yero nyere Bhodhi Yekushambadzira